कामकुरा, जापान मा गन्तव्य | यात्रा समाचार
कामकुरा, जापान मा गन्तव्य
मारिएला क्यारिल | | जापान, के हेर्ने
कामकुरा विशिष्ट मध्ये एक हो टोक्यो बाट गर्न सकिन्छ कि भ्रमणजापानको राजधानी। यदि विश्व यस महामारीको माध्यमबाट गुज्रिरहेको थिएन भने २०२० ओलम्पिक र सबैसँगै जापानको शिखर पर्यटन वर्ष हुने थियो, त्यसैले यो एकदम भ्रमण गरिएको देश हो।
त्यहाँ धेरै सजीलो भ्रमण टोकियोबाट गर्न सकिन्छ र कामकुरा शहरको एक घण्टाभन्दा कम दक्षिणमा छ। सुपर निकट र अत्यधिक सिफारिश गरियो, किनकि साथै, प्रसिद्ध कामकुरा बुद्ध तपाईं फोटोमा के देख्नुहुन्छ?
यो एक छ तटीय शहर जुन टोकियोबाट एक घण्टा दक्षिणपट्टि छ। कुनै समय यो देशको राजनीतिक केन्द्र थियो, १२ औं शताब्दीमा, मिनामोटो शोगुन र होजो रेजेन्ट्सको नियन्त्रणमा रहेको सम्पूर्ण शताब्दीमा चलिरहेको सरकार। पछि सत्ता क्योटो शहरमा लाग्यो, जब राजनीतिक उत्तराधिकारी त्यहाँ बसोबास गर्ने निर्णय गरे।
आज केवल एक छ धेरै तीर्थहरू, ऐतिहासिक स्मारकहरू, र मन्दिरहरूको साथ शान्त सानो शहर। र यो समुद्री तटमा भएको रूपमा, यसमा समुद्र तटहरू छन् जुन ग्रीष्म inतुमा प्राय: धेरै भीड हुन्छ। कामकुरा कसरी जाने?
रेल बाट त्यहाँ तीन विकल्प छन्। तपाईं लिन सक्नुहुन्छ Odakyu लाइन जुन सस्तो तरीका हो। तपाईं एनोशिमा कामकुरा निःशुल्क पास किन्नुहुन्छ र त्यो टोकियो र कामकुरा मा Shinjuku बीच दौर यात्रा समावेश छ। थपमा, यसले एनोडनको प्रयोग समावेश गर्दछ, अर्को ट्रेन तर इलेक्ट्रिक मात्र १ only२० येनको लागि। यातायातको माध्यमबाट यसले पुग्न लगभग minutes ० मिनेट लिन्छ, त्यसैले यदि तपाईं कम समय लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईंले JR लाइन प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
जेआरसँग छ Shonan Shinjuku रेखा, जसले एक घण्टामा शिन्जुकु र कामकुरालाई जोड्छ र costs 940 y येन लागत गर्दछ। जुशीको लागि रेलको लागि पर्खनु सुविधाजनक छ, जुन एक कामकुरा स्टेशनमा रोकिन्छ (दुई घण्टा प्रति घण्टा), अन्यथा तपाईंले ओफुना स्टेशनमा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। अर्को रेखा हो जेआर योकोसुका लाइन टोक्यो स्टेशनलाई कामकुरासँग जोड्दै। यात्रामा एक घण्टा भन्दा कम समय लाग्छ र 940 XNUMX० येन लागत।
जोनका दुई पासहरू छन्: Enoshima कामकुरा नि: शुल्क पास, १,1520२० येन मा, जसमा ईनोडेनको प्रयोगको साथ राउन्ड ट्रिप शिन्जुकु / कामकुरा पनि पर्छ; र Hakone कामकुरा दर्रा, 7000००० येनको लागि), जसले एनोडन र ओडु लाइन को उपयोग गर्न अनुमति दिन्छ, तर तीन चार दिनमा हाकोने वरपर पनि यातायात।
म कामकुरामा के जान्छु? कामाकुरामा मुख्य पर्यटक आकर्षण स्टेशनहरू नजिकै तीन क्षेत्रमा वितरित छन्: किता कामाकुरा स्टेशनको नजिक, कामाकुरा स्टेशन र हेसे स्टेशन। कसरी सानो शहर साँच्चै छ तपाईं खुट्टा मा सार्न सक्नुहुन्छ वा, अझ सुन्दर केहिको लागि, एउटा बाइक भाँडामा लिनुहोस्। त्यहाँ बस र ट्याक्सीहरू पनि छन्, यदि तपाईं अधिक दुर्गम क्षेत्रहरूमा पुग्न चाहनुहुन्छ भने।
हाम्रो पहिलो यात्रा मा छ कामकुरा ग्रेट बुद्ध, कामाकुरा डायबुत्सु। यो अमिदा बुद्धको कांस्य मूर्ति हो जुन कोटोकुइन मन्दिरको आँगनमा छ। यो लगभग एघार मिटर उचाई खडा छ र देश मा दोस्रो सबैभन्दा ठूलो कांस्य बुद्ध प्रतिमा हो। यो १ 1252२२ देखि सुरु भएको हो र मूल रूपमा मन्दिरको विशाल मुख्य भित्री स्थान भित्र रहेको थियो, तर १ place औं र १ XNUMX औं शताब्दीमा ठाउँले धेरै आँधीबेहरी भोग्नुपरेकोले पछि यसलाई बाहिरै सिधै बाहिर राख्ने निर्णय गरियो।
कामाकुराको महान बुद्ध केवल १० मिनेट पैदल वा हेस स्टेशनबाट कम हो, कमकुराबाट ईनोडेन लाइनमा तेस्रो स्टेशन। ईनोडेन टर्मिनल स्टेशन जेआर कामकुरा स्टेशनको ठीक छेउमा छ र यो सानो इलेक्ट्रिक ट्रेन कामकुरालाई एनोशिमा र फुजीसावासँग जोड्दछ। बुद्ध कोरुनाभाइरसका कारण जुन सम्म बन्द थियो र आज यो खुला छ तर यसको समय घटाइएको छ: बिहान 10 देखि साँझ। सम्म। प्रवेश मात्र y०० येन हो, मात्र $3अन्तर्गत।
El Hokokuji मन्दिर यो सानो, सुन्दर र केहि दूर छ। यो जेन बौद्ध धर्मको रिन्जाइ संप्रदायको हो र यसको स्थापना आरम्भिक मुरोमाची कालमा भएको थियो, आशिकगा कुलको पारिवारिक मन्दिर भएकोले। १ 1923 २XNUMX को ग्रेट कान्टो भूकम्प पछि २० औं शताब्दीको सुरुतिर पुनर्निर्माण गरिएको मुख्य हलमा पुग्न नसकेसम्म हामी पहाड चढेर पोर्टिको र सानो बगैंचामा चढ्दा यस्तो देखिन्छ।
मन्दिरमा सब भन्दा बहुमूल्य मूर्ति बुद्धको हो, तर त्यहाँ एक सानो घण्टा टावर पनि छ र सबैमा सबैभन्दा ठूलो खजाना: एक सुन्दर सानो बाँस बगैचा जुन मुख्य हलको पछाडि छ। त्यहाँ २००० वटा बाँस र बीचमा हिड्न साँघुरो बाटोहरू छन्, क चिया घर जहाँ मच्चा चिया (हरियो चिया) पिउने, यो सुन्दरतालाई ध्यानमा राखेर। त्यहाँ केही गुफाहरू पनि छन् जसमा केही अशिकगा कुलका मालिकहरूको खरानी राखिएको जस्तो देखिन्छ।
तपाईं कसरी Hokokuji मन्दिरमा पुग्नुहुन्छ? जोमोजी बस स्टपबाट हिड्दै (यो कामकुरा स्टेशनमा लिइएको हो, यो २०० मिनेटमा १० मिनेट हो)। तपाईं २ 10, २ or वा take 200 लिन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईं हिड्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं हिड्न आधा घण्टा वा एकै रेल स्टेसनबाट केही थपमा पुग्नुहुनेछ। बाँस बगैचा बिहान 23 देखि साँझ 24 सम्म खुल्छ र डिसेम्बर २ to देखि जनवरी from सम्म बन्द हुन्छ। यसको लागत y०० येन छ र यदि तपाईं चिया सेवा चाहनुहुन्छ भने तपाईं थप y०० येन तिर्नुहुन्छ।
अर्को मन्दिर हो Hase मन्दिर, Jodo सम्प्रदायको सम्बन्धित र यसको उच्च को लागी धेरै प्रसिद्ध एक्कासी कन्नन को मूर्ति, दया को देवी। हल लगभग १० मिटर अग्लो छ र मूर्ति सुनौलो काठले बनेको छ जुन जापानमा आफ्नो प्रकारको सब भन्दा ठूलो हो। किंवदन्ती छ कि यो काठ उही हो जुन नाराको कानननको मूर्ति बनाउने काममा प्रयोग गरिएको थियो। मन्दिरमा एउटा संग्रहालय छ, जसले थप प्रवेश शुल्क तिर्दछ, जसले अझ धेरै मूर्तिहरू, चित्रहरू र अन्य राख्छ। अर्को तर्फ एमिडा-डो हल हो जुन अमिदा बुद्धको दश खुट्टा सुनको मूर्ति हो।
मन्दिर, किनकि यो पहाडको छेउमा अवस्थित छ, जससँग एक छ कामकुरा शहर को दृश्यहरु सुन्दर छन् जहाँ बाट सुन्दर छत। त्यहाँ अधिक शान्तपूर्वक रमाइलो गर्न एक रेस्टुरेन्ट पनि छ र तपाईं देख्नुहुनेछ, भairs्या .हरू माथि माथि र तल जान, सयौं साना साना मूर्तिहरू जिजो बोधिसत्वका, जसले बच्चाहरूको आत्मालाई स्वर्गमा पुग्न मद्दत गर्दछ।
ढलानको मुनिको दाहिने भाग मन्दिरमा प्रवेशद्वार हो, बगैंचा र पोखरीहरू सहित। Hasedera Hase स्टेशन बाट केवल पाँच मिनेट को दूरीमा छ। यो बिहान 8 बिहान5देखि :30: p० सम्म खुल्छ र बिहान October बिहान अक्टुबर र फेब्रुअरी बीचमा खुल्छ। यो कुनै पनि दिन बन्द हुँदैन र प्रवेश शुल्क y०० येन खर्च गर्दछ।
कामकुराको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मन्दिर भनेको ससुरुगाओ हचिमान्गु हो। यो १ 1603०XNUMX मा स्थापना भएको हो र हाचिमानलाई समर्पित छ, मिनामोटो परिवारको संरक्षक भगवान र सामान्य रूपमा सामराई। मन्दिर लामो प्रवेशद्वारबाट पहुँच हुन्छ जुन कामकुरा बोर्डवाकबाट जान्छ, सम्पूर्ण शहर पार गर्दै र धेरै टोरिसमुनि पार गर्दै। मुख्य कोठा एउटा सीढीको माथिल्लो तलामा छ। भित्र तरवार, कागजात, मास्क सहित एक संग्रहालय छ ...
सीढीको दाँया तर्फ, २०१० सम्म, त्यहाँ जिन्को रूख थियो जुन एक समय शोगुनलाई आक्रमण गर्न लुक्ने ठाउँको रूपमा काम गर्‍यो। पुरानो, गिरावटमा सुन्दर सुनौलो, यो मार्च २०१० मा आँधीबेहरीबाट बाँचेन र मरे।
चरणहरूको आधारमा त्यहाँ एक स्टेज हुन्छ जहाँ प्राय: संगीत र नृत्य कार्यक्रमहरू हुन्छन् र तपाईं त्यहाँ अर्को अभयारण्य र सहायक भवनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईं यस मन्दिरमा कामकुरा स्टेशनबाट पनि पुग्न सक्नुहुनेछ, या त बस द्वारा वा पैदल। प्रवेश निःशुल्क छ.
हामी कामकुरासँग भएका मन्दिरहरूको स describe्ख्याको वर्णन गर्न सक्दैनौं तर हामी त्यसलाई नाम दिन सक्दछौं: केन्कोजी, जेनिआराइ, एन्गाकुजी, मेगेत्सुइन, आन्कोकुरंजी, जोमोजी, जुइजेन्जी, मायोहोनजी, जोचीजी, तोकेजी र जुफुकुजी। तिनीहरू सबै सुन्दर छन् तर यो सत्य हो कि तपाईं मन्दिरहरू देखेर यसलाई खर्च गर्न सक्नुहुन्न, तेस्रो पटक तिनीहरू सबै समान छन्। हामी के सिफारिस गर्छौं त्यो हो एनोशिमा र यसको तटहरू भ्रमण गर्नुहोस् र केहि पैदल यात्रा गर्नुहोस्।
एनोशिमा टोकियो नजिकै सानो टापु हो जुन तपाईं ब्रिजको साथ तटमा जडित हुनुहुन्छ जुन तपाईं पैदल हिड्नुहुन्छ। यस टापुमा अभयारण्य, अवलोकन टावर, गुफा र बगैंचाहरू छन्। जed्गलको पहाडी खुट्टामा अन्वेषण गर्न सकिन्छ र यसरी तपाईंले थुप्रै मन्दिरहरू देख्नुहुनेछ जुन बेन्टेनलाई समर्पित छ, सौभाग्य, स्वास्थ्य र संगीतको देवी।
त्यहाँ एक एक्वेरियम पनि छ र समुद्र तटहरू राम्रो, न्यानो, शान्त पानी र क्र्याबिंगको साथ छन्! कामकुराबाट एनोडेनले २ 25 मिनेट लिन्छ, शिन्जुुकुबाट तपाईं त्यहाँ पुग्न सक्नुहुनेछ र यही टोकियो स्टेशनबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
अन्ततः, यदि तपाइँ कामकुरामा पैदल यात्रा गर्न मन पराउनुहुन्छ भने त्यहाँ तीन मार्गहरू छन्: डायबुट्सु टुर, टेन्नेन टूर र जियोनामा टुर, आज गत बर्षको आँधीले गर्दा बन्द भयो। यदि तपाइँ अर्को बर्ष जानुहुन्छ भने, कुन खुला छ भनेर जाँच गर्न प्रयास गर्नुहोस्। तिनीहरू शानदार, हरियो मार्गहरू हुन् जसले मन्दिर र मन्दिरहरू जडान गर्ने पहाडहरू पार गर्दछ। सामान्यतया, तिनीहरू आधा घण्टा देखि minutes ० मिनेट भन्दा लामो समय सम्म चल्दैनन्, तर तिनीहरू पक्का छैनन् त्यसैले जुत्ता र वर्षाको लागि सतर्क रहनुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » यात्रा » के हेर्ने » कामकुरा, जापान मा गन्तव्य
Ourense मा के हेर्ने